တောင်ကိုရီးယား စစ်တပ်က ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် အငြင်းပွားနေသည့် ကျွန်းငယ်များအနီး စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု ပြုလုပ်မည် - Xinhua News Agency
တောင်ကိုရီးယား နှင့် အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်များကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် မတ်လအတွင်းက တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံ အရှေ့တောင်ပိုင်း ကမ်းရိုးတန်း Pohang မြို့၌ ပြုလုပ်သော နှစ်စဉ် ပြုလုပ်လေ့ရှိသည့် ကမ်းတက် စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတစ်ခုတွင် တွေ့ရစဉ်(Xinhua/AFP)
ဆိုးလ် ၊ ဇွန် ၁၄ ရက်(ဆင်ဟွာ)
တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်က ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် အငြင်းပွားနေသည့် ကျွန်းငယ်များအနီးတွင် စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း အမည်မဖော်လိုသော အစိုးရ နှင့် စစ်တပ် သတင်းအရင်းအမြစ်များ၏ ပြောကြားချက်ကို ကိုးကား၍ Yonhap သတင်းအေဂျင်စီက ဇွန် ၁၄ ရက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
အရှေ့ပင်လယ်ပိုင်နက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းဟု အမည်ပေးထားသည့် ရေတပ်လေ့ကျင့်မှုကို ဂျပန်နိုင်ငံက Takeshima ဟု ခေါ်ဆိုသည့် Dokdo ကျွန်းငယ်အနီးတွင် ဇွန် ၁၅ ရက်တွင် ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၁၉၈၆ ခုနှစ်မှစ၍ တစ်နှစ်လျှင် နှစ်ကြိမ် ပြုလုပ်သည့် ယင်းလေ့ကျင့်မှုတွင် သတင်းများအရ ရေတပ် နှင့် ကမ်းရိုးတန်းစောင့် ရေယာဉ်များ ၊ တိုက်လေယာဉ်များ နှင့် ရေကြောင်းကင်းလှည့်လေယာဉ်များ ပါဝင်မည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
COVID-19 ကပ်ရောဂါ ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေခြင်းကြောင့် ကမ်းတက်လေ့ကျင့်ခန်း ပြုလုပ်ခွင့် မပေးထားကြောင်း သိရသည်။
ဂျပန်နိုင်ငံ နှင့် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံအကြား လမ်းခုလပ်တွင် ကျောက်ဆောင်တန်းအဖြစ် တည်ရှိနေသည့် ယင်းကျွန်းငယ်ကို ဂျပန်နိုင်ငံက ၎င်း၏ ပိုင်နက်နေမြေအဖြစ် ပြောဆိုထားပြီး ထိုသို့ စစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုကို အစဉ်တစ်စိုက်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
၁၉၁၀ ပြည့်နှစ်မှ ၁၉၄၅ ခုနှစ်အထိ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အား ဂျပန်နိုင်ငံက ကိုလိုနီနိုင်ငံအဖြစ် သိမ်းပိုက်အုပ်ချုပ်ခဲ့ရာမှ ပြန်လည် လွတ်မြောက်ပြီးနောက် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံသည် ယင်းကျွန်းငယ်များအပေါ် ၎င်း၏ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ဆိုင်မှုကို ပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်။ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အား ကိုလိုနီနယ်မြေအဖြစ် သိမ်းပိုက်ထားစဉ် ယင်းကျွန်းငယ်များကို ဂျပန်နိုင်ငံက ၎င်း၏ ပိုင်နက် နယ်နိမိတ်ထဲ ထည့်သွင်း ပေါင်းစည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
S. Korean military to conduct defense drill near disputed islets with Japan
SEOUL, June 14 (Xinhua) — South Korea’s military will conductadefense drill near the islets disputed with Japan, Yonhap news agency reported Monday citing unnamed government and military sources.
The maritime exercise, called the East Sea Territory Protection Exercise, will be staged Tuesday near the Dokdo islets, called Takeshima in Japan.
The exercise, which has been held usually twiceayear since 1986, would reportedly mobilize naval and coast guard vessels, fighter jets and maritime patrol aircraft.
No landing drill will be carried out given the ongoing COVID-19 pandemic.
Japan has protested against the exercise as it laid territorial claims to the rocky outcroppings lying halfway between South Korea and Japan.
South Korea regained its sovereignty over the islets after liberation from the 1910-1945 Japanese colonization of the Korean Peninsula. The islets were incorporated into Japan during the colonization. Enditem
1.File Photo: South Korean and U.S. soldiers takeaposition during an annual joint military landing exercise in Pohang, on South Korea’s southeast coast, on March 12, 2016. (Xinhua/AFP)